पृष्ठ स्पिड र गुगल वेबमास्टर्स: WWW वा No WWW
शनिबार, जून १,, २०१। बिहीबार, डिसेम्बर 5, 2013 Douglas Karr
पछिल्ला केही महिनाहरुमा, म आफ्नो साइटको पृष्ठ लोड समय सुधार गर्न को लागी काम गर्दैछु। म समग्र प्रयोगकर्ता अनुभव सुधार गर्नका साथै मेरो खोज इञ्जिन अनुकूलनलाई मद्दत गर्न यो कार्य गर्दैछु। मैले प्रयोग गरेका केही तरिकाहरूको बारेमा लेखें WordPress तेज, तर मैले होस्टिंग कम्पनीहरूलाई पनि परिवर्तन गरेको छु Mediatemple) र लागू गरियो अमेजनको S3 मेरो छवि होस्टिंग को लागी सेवाहरु। मैले भर्खर स्थापना गरेको छु WP सुपर क्यास साथीको सिफारिसमा, एडम सानो.
काम गरिरहेछ। यस अनुसार गुगल खोज कन्सोल, मेरो पृष्ठ लोड समय गुगल वेबमास्टर सिफारिसहरू बीचमा राम्रोसँग कम भएको छ:
गुगलले तपाइँलाई पूर्वनिर्धारित सेट पनि गर्न दिन्छ कि तपाइँको साइट www.domain मा वा www बिना सीधा जान सेट गरिएको छ। यो जहाँ चीजहरू रमाईलो हुन्छन्। यदि मैले www बिना मेरो पृष्ठ लोड समय अवलोकन गरें भने, तिनीहरू शानदार छन्। जे होस्, यदि मैले wwwको साथ पृष्ठ लोड समयमा हेरी भने, तिनीहरू भय terrible्कर छन्:
पाठ्यक्रम को विडम्बना, यो होस्टिंग प्याकेज म सधैं एक मा जान्छ www पृष्ठ गुगलको प्रतिक्रिया समयमा ठूलो भिन्नताका कारण मैले साइट कन्फिगरेसन गुगल खोज कन्सोल बिहिन गैर- www ठेगानामा सेट गरेको छु। मैले .htaccess फाईलमा मेरो साइटको जडमा रिडिरेक्ट कोड पनि हटाइन जुन www डोमेनमा गैर- www अनुरोधलाई पुनःनिर्देशित गर्दै थियो।
म निश्चित छैन कि यस मध्ये कुनैले मद्दत पुर्याउँछ वा दुख्छ, तर यो तार्किक कुरा देखिन्छ। कुनै विचारहरु?
यो धेरै चाखलाग्दो छ! म सँधै मेरो वेबसाइटहरूलाई WWW संस्करणमा र स्थिरताका लागि रिडिरेक्ट गर्दछु र गुगललाई एकल यूआरएल दिनको लागि अनुक्रमणिकामा क्रमबद्ध हुँदैन। मलाई पनि लाग्छ कि यो आँखाको लागि राम्रो र अधिक सन्तुलित देखिन्छ WWW संस्करण प्रदर्शन गर्न बाध्य पार्नुहोस्। तपाईंको डाटा, तथापि, यो पुनः विचार गर्न एक बाध्यकारी तर्क बनाउँछ। तपाइँको एसईओ परिणाम केहि समय पछि हेर्न म उत्सुक हुनेछु। मलाई मनपर्दछ यदि तपाईं तिनीहरूलाई केही परीक्षण पछि यहाँ साझा गर्नुहुनेछ।
अनौंठो ... भर्खरै म अर्को पोष्ट पढिरहेको थिएँ र सोचिरहेकी थिए कि किन पृष्ठ लोड हुन यति लामो समय लाग्यो। Cdn.js-Kit जस्तो देखिन्छ केहिले सदाको लागि लिइरहेको थियो। तपाईंको ग्राफहरू अनुसार, ook जस्तो तपाईले गर्नु भएको जस्तो गरी रहेछ!
त्यो मेरो टिप्पणी प्याकेज हो, जोशुआ! मैले उनीहरूको सेवाको साथ केही विफलता पनि देखेको छु र चाँडै केहि भन्नु पर्ने हुन सक्छ।
माइकल कुनै पनि तथ्या !्क साझा खुशी हुनेछ! फेरी एक पटक, यद्यपि, सबैजना "www" ठेगानामा गइरहेका छन् त्यसैले म किन पक्का छैन कि किन Google बट्स त्यस मार्गमा पुग्न ढिलो छ। सोच्दै यदि यो मेरो होस्टिंग वा एक अपाचे सेटिंग वा केहि संग एक नेमसर्भर मुद्दा हो।
जुन 28, 2010 मा 6: 09 PM
याहू! WWW प्रयोग गर्न सिफारिस गर्दछ। गैर- www को लागी अनुमति दिन। स्थिर छवि डोमेन:
यदि तपाईंको डोमेन छ भने http://www.example.org, तपाईं static.example.org मा तपाईंको स्थिर घटक होस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। जे होस्, यदि तपाईले पहिले नै शीर्ष स्तरको डोमेन उदाहरण.org मा कुकिजहरू सेट गर्नुभयो http://www.example.org, त्यसो भए सबै अनुरोधहरूमा static.example.org मा ती कुकीहरू समावेश हुन्छन्। यस अवस्थामा, तपाइँ पूर्ण नयाँ डोमेन किन्न सक्नुहुन्छ, तपाइँको स्थिर कम्पोनेन्टहरू यहाँ होस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, र यस डोमेनलाई कुकी-रहित राख्न सक्नुहुन्छ। याहू! yimg.com, YouTube ले ytimg.com, अमेजनले इमेज-amazon.com र त्यस्तै प्रयोग गर्दछ।
जब यो पढेर, म संग गएको छु http://www….because याहू! धेरै चलाख छ।
यो पहिलो हो मैले कुनै पनि www गतिको मुद्दाहरूको बारेमा सुनेको छु। अरु कसैसँग उस्तै अनुभव छ?
जुन 28, 2010 मा 6: 11 PM
साथै, सबै प्रमुख साइटहरू प्रयोग गर्छन् http://www.: अमेजन, गुगल, याहू!, बिंग, आदि। तपाइँ सोच्नुहुन्छ कि तिनीहरूले यो प्रयोग गर्दैनन् यदि यसले उनीहरूको साइटहरू कम गर्दछ भने।
म कुनै "WWW" लाई जोड दिंदैन त्यसैले मेरो डोमेन मात्र मेरो नाम हो। मैले द्रुत गतिका कारणले यसलाई परीक्षण गरेको छैन, तर कुनै पनी मेरो साइट भ्रमण गर्नु भएपछि तपाईले "WWW" प्राप्त गर्नुहुने छैन।
मैले यसलाई एक ब्रान्डिंग परिप्रेक्ष्यबाट हेरी। म व्यवसायहरूको लागि लाग्छ - "WWW" ले निर्भरताको धारणा राख्छ।
म आफैंमा गतिको लागि परीक्षण गर्न आधा प्रलोभनमा छु। मैले नियमित आधारमा मेरो साइट धेरै चाँडै लोड भएको याद गरेको छु। संयोग?
फेब्रुअरी १,, २०११ 25:१:2011 अपराह्न
त्यो चाखलाग्दो छ। अर्को नोटमा, के तपाईंलाई www समावेश गर्ने उत्तम हो जस्तो लाग्छ वा छैन, र यो दुबैलाई अनुमति दिन हानिकारक हो?